Tao Torkia, torotoro ravina fireharehana niharan’ny herisetran’ny polisy · Global Voices teny Malagasy
Niditra an-tsehatra ny polisy tsy hisian'ny torotororavin'ny herinandrom-pireharehana tao Istanbul
Voadika ny 16 Jolay 2021 4:20 GMT
Fanamarihana: Ny fantatsika hoe “pique-nique” dia fitsangatsanganana eny amin'ny tanimboly maitso, avy amin'izay no nanaovana ny dika ho torotoro ravina na dia fifampidinihana sy fivoriana eny an-tsaha aza no ahafantarantsika izany torotoro ravina sy tapatapak'ahitra izany. Tsy misy resaka mifoka bozaka na mifoka maina velively tsy akory.
Pikantsary tamin'ny horonantsary miresaka Diabem-pireharehana iray notontosaina tao amin'ny tanàna tiorka iray antsoina hoe Izmir tamin'ny taona 2014. Hita ato ny lahatsary: https://www.youtube.com/watch?v=vXSOMgTR7Qk
Naparitaky ny polisy tiorka tamin-kerisetra ny vondron'olona iray mankalaza ny herinandrom-pireharehana tao amin'ny Kianja Maçka, iray amin'ireo sehatra maitso sisa miangana ao an-tanàna ao amin'ny distrikan'i Şişli tamin'ny 22 jona. Nanomboka ny fidiran'ny polisy an-tsehatra araka ny tatitra taorian'ny namoahan'ny Biraon'ny Governoran'i Şişli fanambaràna mandrara ny fitsangatsanganana satria mety hiafara amin'ny “fikorotanam-bahoaka” izany.
Notafihan'ny polisy ny torotoro ravina tsy mihinan-kena (vegan) nataonay tao Maçka androany. Nosamborina ny iray tamin'ny namanay, ary maro ireo voavelively. Tsy ho ampanginina izahay, tsy matahotra izahay, tsy hankatoa izahay !
Mpanoratra tantara foronina Tiorka-Britanika efa nahazo loka tamin'izany antsoina hoe Elif Şafak namoaka sary ihany koa nanaraka izany:
Mizara tapa-mofo, mivetso hira, sombim-pinamanana sy firaisankina, mahafantatra fa tsy irery ianao eto amin'ity izao tontolo izao ity… saingy manosi-bohontanana izay rehetra tsara ity rafitra ity. Ry polisy, izay toa manaja ireo mpamono vehivavy, inona no andrasanareo avy amin'ny tanora tsy manan-tsiny manorotoro ravina milamina ?
Araka ny tatitry ny Gazete Duvar, seha-baovao anjotra iray, nokinasa hotontosaina tao Heybeliada (iray amin'ireo vondro-nosy Princes ivelan'ny morondranon'Istambul) ny torotoro ravina (picnic) tamin'ny voalohany fa noraràn'ny fitaleavan'ny polisy ao Princes’ Islands.
Voatsikera tamin'ny alalan'ny hashtag #PiknikYasaklanamaz [tsy mety raràna ny torotoro ravina] ny fidiran'ny polisy an-tsehatra.
Nofenoin'ny mpanoratra an-gazety, mpikatroka, ary mpikambana hafa sary sy horonantsarin'ny fidiran'ny polisy an-tsehatra ny Twitter. Nisy antsipirian-drandrana iray nozarain'ny sehatra famoahan-gazety an'olontsotra Dokuz8Haber:
🌈 Maçka Parkı'nda Onur Haftası pikniği düzenleyen kitle polislerce ablukaya alındı.#dokuz8/@puleragema pic.twitter.com/MYUFThNb11
Nataon'ny polisy ho tafahitsoka ireo andian'olona nikarakara ny torotoro ravina herinandrom-pireharehana tao amin'ny kianja Maçka.
Nisy mpikambana iray tao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTI+ ao amin'ny Oniversiten'i Boğaziçi no tapaka ny tanany.
Tapaka ny tanan'ny namanay. Fantatra ny nahavita izany.
Mitovy amin'izany ihany koa, nitatitra ny sampana ao Istanbul ao amin'ny Fikambanan'ny Mpahay Lalàna Liam-Pivoarana (ÇHD) fa maro amin'ny mpikambana ao aminy ihany koa no voadaroka:
Tamin'ny fanononana ny fanapahan-kevitra fandraràna tsy ara-dalàna avy amin'ny Biraon'ny Governoran'Istanbul, notafihan'ny polisy niaraka tamin'ny alika maro ny torotoro ravina fireharehana tao an-kianja Maçka. Olona 1 no nohazonia, maro amin'ireo mpiara-miasa aminay sy mpikambana maro ao amin'ny LGBTI+ no nodarohana sy nampijaliana. Mitohy ny fiandrasana ao amin'ny kianja Maçka. Nahavita heloka bevava fankahalàna ny polisy!
Nampahafantatra ihany koa ny Biraon'ny Governora ao Şişli fa voarara ao anatin'ny 30 andro avokoa ny hetsika rehetra nokinasan'ny Komity Herinandrom-Pireharehana ao Istanbul, araka ny tatitry ny gazety iray hafa ao an-toerana antsoina hoe Evrensel.
Tsy vao sambany ny hetsika Fireharehana no noraràna ho fitandroana ny filaminam-bahoaka tsy hisian'ny fikorontanana. Tamin'ny taona 2015 ny polisy tiorka no nitifitra tamin'ny etona mandatsa-dranomaso sy tafondron-drano ny mpandray anjara amin'ny diabem-pireharehana. Tamin'ny taona 2016, noraràna ny diabe tao Istanbul ka ny antony lehibe tamin'izany dia “ho fitandroana ny filaminam-bahoaka sy ny fiarovana”. Tamin'ny taona 2017, tao an-drenivohitra Ankara, napetraky ny governemanta ny fandraràna tsy misy fitsaharana sy feno ireo lanonana Rehareha, izay nampiankinina tamin'ny fahefana feno amin'ny “hotakotaka” nomena ny governemanta taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2016. Mitovy amin'izany, tao Istanbul, noraràna ny dihy an-dalambe Rehareha noho ny olana ara-piarovana tamin'io taona io. Mbola noraràna noho ny antony ara-piarovana ihany ny lanonana tamin'ny taona 2018 na dia mbola maro aza ireo nihaika ny fandraràna tamin'ny alalan'ny fandehanana tao Istanbul mialoha ny nidiran'ny polisy an-tsehatra tamin'ny fampiasana ireo kapoaka miaty etona mandatsa-dranomaso sy tafondron-drano. Tamin'ny taona 2019, niditra an-tsehatra ny polisy raha nankalaza ny diabem-pireharehana faha-17 tao Istanbul ny andian'olona. Tamin'ny herintaona indray dia nofoanana ny diabe noho ny fepetra mihatra noho ny COVID-19.
Tamin'ny taona 20147 no nisy diabe farany nahazoana alalana.